HDPE anwụrụ dredging floater, mere site na-ajụ njupụta polyethylene ihe magburu onwe mgbanwe, jupụtara na elu ike polyurethane ụfụfụ, UV-àmà umi magburu onwe arụmọrụ, elu buoyancy, mfe installtion. Kpọtụrụ anyị kpamkpam ma ọ bụrụ na i nwere mmasị na anyị HDPE anwụrụ dredging floaters !!
Tụkwasịnụ Ikike: 3 × 40ft containers kwa izu
Port Of Mbula: Ningbo ma ọ bụ Shanghai
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: T / T ma ọ bụ apụghị ịgbanwe agbanwe LC na anya
Oge nzipu: Dabere na nke ukwu nke iji.
The HDPE anwụrụ floater na-mere si na-ajụ njupụta polyethylene ihe magburu onwe mgbanwe, jupụtara na elu ike polyurethane ụfụfụ n'ime. Na ezi uche Ọdịdị na ezi arụmọrụ, ọjà floater-aghọ ezigbo nnọchi nke omenala ígwè floater maka sere n'elu dredging ọkpọkọ.
Mba Structure Name ihe
2 Wet Na Ihe Mechiri emechi-cell Polyurethane ụfụfụ
3 Steel n'ise Galvanized carbon nchara ma ọ bụ 304 igwe anaghị agba nchara
※ The elu shei na-akpụzi na MDPE ihe onwunwe na otú ahụ ihe ọma ike, divulsion eguzogide & ujo eguzogide nwere ike mbo.
※ UV-àmà umi na-kwukwara na ndị peucine iji chebe shells si mmebi nke gburugburu ebe obibi mgbanwe na ala okpomọkụ.
※ Na elu uru nke buoyancy, ndị sere n'elu ahụ rụrụ nke ọma mgbe mmiri na ebili mmiri, ikuku ma iku si n'ụgbọ mmiri.
※ MDPE ozu bụ ìhè na-adaba adaba iji wụnye & transfer.settlement nke isi, ya agbanwe ike bụ nnọọ ike, ezi aseismic arụmọrụ.
※ The-ese n'elu mmiri ahụ bụ na gburugburu ebe obibi enyi na enyi na ike ike itighachi.
Floater Ne Dia.
(mm) Floater Total Ogologo
(mm) Floater Outer Shell ọkpụrụkpụ
(kgs / Mmakọ)
Kwuru: The nkọwa na ndepụta nwere ihe anyị nwere moldings n'ihi na ugbu a. Omenala mere nkọwa dị
Previous: SPH160 Hydraulic n'isi Fusion ịgbado ọkụ Machine
Osote: eyi mwekota Sddle
Sunplast, site karịrị afọ 15 'mmepe, a maara ugbu a dị ka otu n'ime ndị na-eduga na-emepụta na suppliers nke hdpe anwụrụ (poli anwụrụ) maka mmiri siwa & drainage na China. Anyị factory ka ẹkenam ọtụtụ elu teknụzụ na equipments n'ime ya. Biko free ịzụta àgwà na ala price ngwaahịa mere na China anyị.
Dredging ise n'elu
Dredging Pipe ise n'elu